သူဌေးမကွီးမာမာနှယျ – My Blog
မာမာနှယျကုတငျပျေါတှငျ ခေါငျးအုံးကို ကြောမှီထိုငျကာပေါငျနှဈခြောငျးကိုခပျကားကားလုပျထားစဉျ သူမထမီအောကျမှ ခေါငျးတဈခုကို အသာပှတျပေးနပွေီး ဆေးလိပျတဈလိပျကို အရသာခံသောကျ နေ၏။ဆေးလိပျငှကေို့ အဆုတျထဲသို့ရှိုကျသှငျးလိုကျပွီး တဈ ခကျြအဖုတျထဲမှ ကငျြခနဲဖွဈသှားသဖွငျ့မကျြနှာတဈခကျြရှုံ့လိုကျသညျ။တုတျခိုငျသော ပေါငျနှဈခြောငျးကို အတငျးညှပျထားလိုကျ ပွီး ခေါငျးကိုအတငျးပှတျသပျနလေိုကျသညျ။နောကျမှ ဘေးရှိစားပှဲပျေါမှ ဆေးလိပျပွာခှကျထဲ ဆေးလိပျကို ထိုးထညျ့လိုကျပွီး ထမီ အောကျစကို ဆှဲလှနျလိုကျသောအခါ သူမပေါငျကွားမှ နုနယျလှနျးသော မကျြနှာပေါကျနှငျ့ အသားအရဖွေူဖှေးနသေော ခပျခြော ခြောကောငျလေးတဈယောကျမှာ မကျြနှာတဈခုလုံးရှဲနဈလကျြ ခေါငျးမော့လာလေ၏။
“ကောငျလေး..နငျ့ကိုဘယျသူကရပျခိုငျးလို့ရပျလိုကျတာလညျး..” သူမအမေးကွောငျ့ ထိုခြာတိတျမှာ ထိတျလနျ့စှာဖွငျ့ “ဟို…မနှယျ ပီးသှားလို့..တျောပီထငျလို့ပါ..ကြှနျတျောထပျလကျြပေးပါ့မယျ..”ကောငျလေးက အလနျ့တကွား မကျြလုံးဝိုငျးကွီးမြားနှငျ့ ဆိုလိုကျ ရငျး မာမာနှယျပေါငျကွားကို မကျြနှာအပျလိုကျပွီး လြှာထုတျခါ အလြှားလိုကျတဈခကျြပငျ့ လကျြလိုကျသညျ။ “တျောစမျး..ငါ့ စောကျပတျကငျြတယျ..ထ….ငါ့အကြီခြှတျပေးစမျး”မာမာနှယျကောငျလေးကိုငေါကျလိုကျရငျး သူမရငျစအေ့ကြီကို ခြှတျခိုငျးလိုကျ သညျနှငျ့ ၎င်းငျး ကောငျလေးကလညျး သူမအကြီကွယျသီးမြားကို အမိနျ့အတိုငျး လကျလှမျးခါဖွုတျပေးလိုကျသညျ။
သူမရငျဟာလာဟငျးလငျး ဖွဈသှားသညျနှငျ့ ဟငျးခြိုပနျးကနျလုံးကို မှောကျထားသညျနှငျ့ တူသောစနေ နှဈခိုငျနှငျ့ မို့မောကျတငျးမာ နလေကျြ နီရဲသောပတ်တမွားစကေ့လေးတငျထားသညျ့အလား နို့သီးခေါငျးမှာ အကွောစိမျးမြှငျမြှငျလေးမြား ဝနျးရံခစားနသေညျကို တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။ကောငျလေးကတော့ မာမာနှယျအမိနျ့ပေးထားလို့ ကုတငျပျေါရောကျကတညျးက မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျး တကျလာခငျြးဖွဈသညျ။
“ဟဲ့…နငျ့ကို..ကွညျ့ဖို့ချေါထားတာမဟုတျဘူး..ငါ့နို့ကို ကိုငျလေ..ဘာအူကွောငျကွောငျလုပျနတောလညျး…”ကောငျလေးမှာ မာမာ နှယျကို ဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈနစေဉျ သူမခိုငျးလိုကျသဖွငျ့ မာမာနှယျ့ နို့နှဈလုံးကို အသာအယာကိုငျလိုကျသညျနှငျ့ မာမာနှယျက လညျး လကျတဈဖကျကိုကောငျလေး ပေါငျကွားထဲထညျ့ကာကောငျလေး၏ ဖှားဖကျတျောကို လကျနှငျ့ဆုတျလိုကျသညျ။ ကောငျ လေ၏ လီးမှာ ထိုအခြိနျထိမထောငျလာသေးသညျကို အခုမှ မာမာနှယျသိလိုကျရတော့ “ဟငျ..နငျ..ဘာဖွဈလို့..နငျ့လီးကဘာဖွဈ နတောလဲ..ဟဲ့..ပွောလေ..” “ဟို..ဘာမှမဖွဈ….ကြှနျတျော…ဟို….မနှယျကို…..ကွောကျ….ခဏလေးပါ..မနှယျ..အခု ..ခကျြခငျြး..မတျ……..မှာ”
“နငျနဲ့ကတော့….အခုခကျြခငျြး..နငျဂှငျးထုစမျး…..ငါလိုးတာခံခငျြနမှေ..တှမေ့ယျ..နောကျမှ..အခု..နငျ့ လီးကိုထုလေ…မွနျမွနျလုပျ..” “ဟုတျကဲ့..မနှယျ..အငျ့..အငျ့..”ခြာတိတျမှာ မာမာနှယျစိတျဆိုးမှာ ကွောကျသဖွငျ့ သူ့၈လကျမ လောကျရှညျသောလီးကို အရပွေားနာအောငျအတငျးဆှဲဆှဲခရြငျး ဂှငျးထုလိုကျသညျနှငျ့ လီးမှာ အကွောပွိုငျးပွိုငျးထခါမတျ ထောငျထ လာလသေညျ။မာမာနှယျက ကောငျလေး၏လီးမတျလာသညျကိုမွငျသညျနှငျ့ အောကျတှငျကနျြသေးသောထမီကို ခြှတျ လိုကျရငျးကောငျလေးဆီလှမျးပဈလိုကျသညျ။ကောငျလေးကလညျး မာမာနှယျလှမျးပဈလိုကျသောထမီကို ယောငျပွီးဖမျးလိုကျ သညျ။
“နငျ..အဲဒီထမီကို ဝတျထားစမျး..မိနျးမလိုဝတျ…လီးလညျးကမြသှားစနေဲ့..ဝတျလေ..”ကောငျလေးမှာ ထမီကိုမိနျးမလို ဝတျဆငျ လိုကျရသညျ။လီးကထောငျမတျနသေဖွငျ့ ထမီအောကျတှငျတောငျမတျနလေကျြရှိလေ၏။ “ကဲ..နငျ..ပကျလပျအိပျ.. နောကျထမီ ကိုလှနျလိုကျ..ဟုတျပီ..”မာမာနှယျပွောပွောဆိုဆို ကောငျလေး၏ကိုယျပျေါသို့ တကျခှလိုကျပွီး သူမစောကျပတျကို လီးနှငျ့တခေ့ါ ဖွညျးဖွညျးခွငျးထိုငျခလြိုကျသညျ။ “ကောငျမ..နငျ့လီးက..တုတျလိုကျတာ..အငျး..အငျး..အငျ့..အငျ့..ကောငျမ..ငါ.နငျ့ကိုတကျလိုး တာကောငျးတယျမလား…ကောငျမဖွလေေ..ဖွနျး..အငျ့.အငျ့..အငျ့..” “ကောငျးပါတယျ..မနှယျရယျလိုးပါ..ကြှနျတေျာ့ကိုလိုးပေး ပါ…ကောငျးလှနျးလို့..အ..မနှယျဖွညျးဖွညျး..အ..ဖွညျး..အ..ဗေါကျ..ဗေါကျ..ဗေါကျ..ဗေါကျ…”မာမာနှယျမှာ အပျေါမှနခေါ ဖငျလုံး ကွီးကိုမမတငျ ..ပီးအရှိနျနှငျ့ ကောငျလေးပျေါဆောငျ့ဆောငျ့ခသြညျ။ကောငျလေးပါးကိုလညျး အပျေါမှ ဘယျပွနျညာပွနျလညျးရိုကျ လိုကျသေးသညျ။
တငျပါးနှဈခု ကွားမှာ ၎င်းငျးကောငျလေး၏ လီးတနျက ပျေါလာလိုကျပြောကျသှားလိုကျဖွငျ့နှဈယောကျလုံးအရှိနျတကျနကွေသညျ။ ကွာလာတော့မာမာနှယျက မိနျးမသားဆိုတော့မောလာသညျ။ “ဟငျ..ဟငျ..ကောငျ..လေး..ထ..ငါ့ကိုလာလိုးစမျး..ငါကုနျးပေး မယျ” မာမာနှယျပွောပွီးသညျနှငျ့ ကောငျလေးကိုယျပျေါမှ ဆငျးခါ ဘေးတှငျ ဖငျဘူးတောငျးထောငျပေးထားလိုကျသညျ။ျ၎င်းငျး ကောငျလေးမှာလညျး အမွနျထ မာမာနှယျ့ခါးကိုစုံကိုငျပွီး သူမစောကျပတျထဲ ဆောငျ့သှငျး..ဆောငျ့ထုတျဖွငျ့ ကွမျးကွမျးလေးလိုး တော့၏။မာမာနှယျ ဖငျလုံးမှာ ဆောငျ့လိုးနသေညျ့ဒဏျကွောငျ့ လှိုငျးထလကျြရှိလေ၏။ တဖွညျးဖွညျးကောငျလေးမှာ မွနျလာပွီး မတျတတျရပျဒူးကှေးကာ တဆကျဆကျဖွငျ့ စကျသနေတျပဈသလို လိုးလိုကျမှ မာမာနှယျမကျြနှာမော့လာပွီး ဆံပငျမြားခါရမျး လကျြ အတငျးပငျ ပွနျလညျ ဖငျကိုနောကျပဈပွီး ဆောငျ့ခကျြနှငျ့အညီ တောငျ့ထားနရေသညျ။
“ဘတျ..ဘတျ.ဘတျ.ဘတျ..ဗေါကျ.ဗေါကျ.ဗေါကျဗေါကျဗေါကျဗေါကျဗေါကျ.အငျ့.အငျ့.အ..အ..အ.အအ.အ.အအအအအအအအ အ..အငျ့.အား..ရှီး..ဟ..”တဈမိနဈလောကျ စကျသနေတျမှလေို့ကျသညျနှငျ့ မာမာနှယျ့ စောကျပတျကုနျးမှ အရညျမြား ကဆြငျးလာ ပွီး လကျမွှောကျအရှုံးပေး ဖငျကုနျးပေးသညျနှငျ့တနျအောငျ အရသာရှိစှာဖွငျ့ မှောကျကသြှားလေ တော့၏။မာမာနှယျပီးသှား သညျကို သိလိုကျသညျနှငျ့ ကောငျလေးမှာ ဆကျမလိုးရဲ အသာအယာ သူ့လီးကိုစောကျပတျကွားမှ နောကျဆုတျခါထုတျလိုကျရ သညျ။ “ဟူး..ကောငျလေး..နငျတယျတျောပါလား..ငါစောကျရညျတျောတျောခနျးသှားပွီ..နငျမပီးသေးဘူးမလား..လာ..ငါမကျြနှာ ပျေါတကျခှပွီး..ဂှငျးထုစမျး..”ကောငျလေး လီးကိုကိုငျ မာမာနှယျလညျပငျးနားတကျ ဒူးထောကျလိုကျပွီး လီးကိုလကျနှငျ့ ဂှငျးထုနေ လသေညျ။
“အငျး..ထု..ထု..လရညျတှေ.ငါ့မကျြနှာအနှံ့စငျအောငျလုပျစမျး..ထု.မွနျ.မွနျမွနျ..ထု..အ..ဟုတျပွီ..အငျး.ကောငျးလိုကျတာ..နှေးနေ တာပဲ..အငျး..အငျး”လရညျထှကျသညျနှငျ့ မာမာနှယျက လီးကိုလကျနှငျ့ကိုငျပီး မကျြနှာအနှံ့ဖွနျးခတြော့၏။ လီးဒဈဖြားကိုလညျး ပါးစပျနှငျ့ နို့စို့သလို တပွှတျပွှတျစို့လိုကျသေး၏။ကောငျလေး လီးရညျကုနျသှားမှလှတျလိုကျပွီး မကျြနှာအနှံ့ အဖွူပွဈပွဈ လရညျ မြားကို တယုတယနှငျ့ လိမျးကြံနလေတေော့သညျ။ “နငျ့..လရညျကပဈြလိုကျတာ..အငျး.အရသာလဲရှိတယျ..လာအုံး..ဟစမျး..”မာ မာနှယျက သူ့လကျညှိုးနှငျ့မကျြနှာပျေါက လရညျအခြို့ကို သပျယူလိုကျပွီး ကောငျလေးပါးစပျထဲ လကျညှိုးထညျ့ခါ လရညျကို လကျြခိုငျးလရော “ဘယျလိုလဲ..ငါပွောတာ..နငျ့လရညျက .အရသာရှိတယျမလား..”
“အငျး..ဟုတျ..ဟုတျကဲ့.မ.နှယျ…အ.ရသာ.ရှိပါတယျ..”ကောငျလေးမှာ ကိုယျ့လရညျကို ကိုယျတိုငျမြိုခနြရေပွီး မာမာနှယျအကွိုကျ အလိုကျသငျ့ဖွကွေားမှ ပိုဆိုးတော့သညျ။ “အငျး..ဒါဆို..နောကျနငျ..ဂှငျးထုပွီး.ကိုယျ့လရညျကို..စားပေါ့..အခုတော့..ငါ သေးပေါကျခငျြလာပွီ..အိမျသာထဲလိုကျခဲ့..”မာမာနှယျကုတငျပျေါမှ ထပွီး ၎င်းငျးကောငျလေးလကျကိုဆှဲကာ အခနျးထဲရှိသူမအိမျသာ သို့ ချေါဆောငျသှားသညျ။ နောကျအိမျသာဘိုထိုငျတှငျ ထိုငျပွီး “လာ..ကောငျလေး..နငျကွိုကျတဲ့..ငါ့မကျြနှာပျေါက..နငျ့လရညျတှေ ကို လြှာနဲ့လာလကျြစမျး..ပွောငျနအေောငျလကျြနျော..” ကောငျလေးခငျဗြာ..ဘာမှာပွနျမလှနျဝံ့ပဲ..သူ့လရညျမြား ဖွငျ့ပွောငျလကျ ပွဈခြှဲနသေော မာမာနှယျ့မကျြနှာအနှံ့ကို လြှာလေးထုတျပွီး ရကျရကျပေးနစေဉျ မာမာနှယျက အိမျသာထဲသို့သေးမြား တဗွနျးဗွနျး ပေါကျခနြလေကျြရှိသညျ။မာမာနှယျသေးပေါကျပီးတော့ မကျြနှာပျေါမှာ လရညျမြားတစကျမကနျြ အောငျရကျပွီးသှားပွီဖွဈ၏။
“ကောငျးတယျ..နငျ့က…အခွောကျကနြတောပဲ..အငျးလေ..ငါလိုးတဲ့ကောငျလေးတှလေညျးအခွောကျဖွဈကုနျတာပဲ..နငျကထမီနဲ့ပို လိုကျတယျ..နောကျငါအပွငျသှားရငျ မိနျးမလိုဝတျပွီးလိုကျရမယျ..ကွားလား” “ဟုတျကဲ့ပါ..မနှယျ” “နောကျက..ရှငျလို့ထညျ့ ပွောစမျး..နောကျငါချေါရငျ..ရှငျလို့ထူးရမယျ..ဗြာလို့ထူးရငျ..ငါ့အကွောငျးသိစရေမယျ..” “ဟုတျကဲ့ပါရှငျ..” “အငျး..လာ..ငါ့ သေးပေါကျပွီးတာ နငျကဘာကွညျ့နတောလဲ..ငါ့သေးဘယျလိုနလေဲ.လာခပျသောကျကွညျ့..”မာမာနှယျက အေးစကျစှာခိုငျးလိုကျ သဖွငျ့ ကောငျလေးဒူးထောကျခလြိုကျပွီး ဘိုထိုငျအိမျသာထဲတှငျ သေးနှငျ့ရေ ရောနသေော ဝါကငျြ့ကငျြ့အရမြေားကို လကျခုတျနှငျ့ ထညျ့ယူလိုကျခါ မော့သောကျခလြိုကျသညျ။ “ဘယျနှယျ့လဲ..ငါ့သေးက..ကောငျးတယျမလား..နံကောနံလား”ကောငျလေးမှာ ဆိုးဝါး လှသောအရသာရညျကို ကွိတျမှိတျမြိုခလြိုကျရငျး “ဟို..ကောငျးပါ..တယျ…သေးနံ့တော့…နံတယျရှငျ့” “ဟငျး..ဟငျး..သေးပဲနံမှာ ပေါ့..ဒါတောငျရရေောထားလို့..ကဲပါ..လာနောကျဆိုငါ..နငျ့ပါးစပျထဲသေးပေါကျခပြါ့မယျ..အခုတော့နငျပွနျလိုကျခဲ့..င့ါဖငျကိုလာ လိုးဦး..ငါဖငျခံခငျြနပွေီ…ဖငျပေါကျကလဲယားလိုကျတာ.ရှီး”မာမာနှယျအိုးကိုခါရမျးပွီး အိပျခနျးထဲပွနျဝငျသှားသဖွငျ့ ကောငျလေး မှာလညျး ဖငျခပြေးရနျလိုကျသှားရလေ၏။
ကုတငျစောငျးတှငျလကျထောကျလိုကျပွီး ဖငျကိုနောကျပဈ ခါးကိုကုနျးလိုကျသဖွငျ့ ဖွူဖှေးနသေော ဖငျသားနှဈခုကွားမှ နီညိုရောငျဖငျပေါကျကို တှလေို့ကျရတော့ သေးသောကျလိုကျရသဖွငျ့ နငျတငျတငျဖွဈနသေညျမှာ ထိုမွငျကှငျးကိုတှလေို့ကျရ သညျနှငျ့ ပွပြေောကျသှားသလို ကောငျလေးခံစားလိုကျရသညျ။ မာမာနှယျကုနျးခကျြကလညျး ရကျစကျသညျ။တုတျခိုငျပွီးလုံးဝနျး သော ပေါငျနှဈခြောငျး ထောကျကနျထားသညျ့ အိစကျညကျလှသညျ့ ဖငျသားနှဈခွမျးကွားမှဖငျပေါကျကို လိုးရမညျဆိုတော့ ကာ…..။ကောငျလေးမှာ ခုနမှပီးသျောလညျး ၎င်းငျးအနအေထားကိုမွငျတှေ့ ရသညျနှငျ့ သူ့ပေါငျကွားက ညီဘှားမှာ မတျထောငျလာ နေ၏။ ဝတျထားသောထမီကို ကှငျးလုံးခြှတျထားလိုကျသဖွငျ့လညျး လီးမှာ လှတျလှတျလပျလပျ ကွီး တောငျနသေညျ။ “ကောငျ လေး..နငျအံဆှဲထဲမှာ ဖငျလိုးဖို့ဆီ ရှိတယျ..နငျ့လီးကိုရှဲနအေောငျလိမျး..နောကျငါ့ဖငျကိုလညျးလာလိမျးပေးအုံး..မွနျမွနျ..ဒီက.ဖငျခံ ခငျြပါပွီးဆိုမှ…”မာမာနှယျဆိုလိုကျသညျနှငျ့ ယခုမှကောငျလေးမှာ တကျတကျကွှကွှနှငျ့ အံဆှဲကိုဖှငျ့ ပုလငျးထဲမှ ဘာရညျမှနျးတော့ မသိပွဈခြှဲခြှဲအရညျတဈခြို့ကို သူ့လီးမှာ ရှဲနအေောငျသုတျပေးလိုကျ၏။
နောကျသူလကျမှာ အရညျတဈခြို့ကို နှိုကျယူလာပွီး မာမာ နှယျကုနျးပေးထားသော နောကျတှငျနရောယူခါ လကျကိုဖငျသားခွမျးကွီးမြားကို ဆှဲဆှဲနယျပေး..ဖငျပေါကျကို လကျနှငျ့ခပျကွမျး ကွမျးလေးနှိုကျပေးလုပျလိုကျသညျနှငျ့ မာမာနှယျမှာ ဖငျကိုနောကျကိုအတငျးကောကျပဈ ပါးစပျမှလညျးတဟငျ့ဟငျ့နှငျ့ ကာမဒီရေ အထူးတကျနလေတေော့၏။ “အငျးကောငျးတယျ..နှိုကျ.နှိုကျ.ခပျကွမျးကွမျးလေးလုပျလေ..အငျ့..အငျ့..အ..ကောငျလေးရယျ…ငါ့ ဖငျကို..လကျတဈဆုံးထိုးစမျး..အား..အ.အငျ့..လုပျ.လုပျ.. ကောငျးတယျ..ကောငျး..အ.အ.ငါ့ဖငျကို ..ရိုကျအုံး လေ..အငျ့.အငျ့..ဖွနျး..ဖွနျး..ဖွနျးဖွနျး..အား.အားအား..ရိုကျရိုကျ..ကောငျးတယျ..အငျး..” “ဖွနျး.ဖွနျး.ဖွနျး.”မာမာနှယျဖငျသားမြား ကို နီရဲတှတျအောငျ ကောငျလေးမှာ လကျဖဝါးဖွငျ့တဖွနျးဖွနျးရိုကျနှပျနလေသေညျ။ သူမတော့မညျသို့နမေညျမသိ ကောငျလေး ကတော့.လကျဖဝါးကိုကွိနျးစကျနသေညျ။ “ရပွီ..ငါ့ကိုဖငျကိုလိုးတော့..အီး…….ဟုတျတယျ..ဖွညျးဖွညျး..အ..အ. ရှီး..နာလိုကျ တာ..အား..ဖွညျးဖွညျးထညျ့..အ..အ.အငျး..ခဏ..ခဏ..စိမျထားအုံး”မာမာနှယျ့ဖငျထဲ ကောငျလေးလီးမှာ တဈဝကျလောကျအသာ ကွိတျထညျ့သောကွောငျ့ ဝငျသှားသညျ။ ဖငျသားတဈခုလုံး ရှုံ့ထားသဖွငျ့ လီးမှာ ကွပျထုပျလကျြအံကွိတျယူရအောငျအရသာရှိလှ သညျ။
ကောငျလေးကလညျး စိမျထားတုနျး အငွိမျမနေ ဖငျကိုစကောဝိုငျးပတျတလှုပျလှုပျ ကစားပေးနေ၏။မာမာနှယျ့ နို့ကို လညျး လကျနှဈဖကျဖွငျ့ လှမျးလှမျးကိုငျသညျ၊ ဆှဲသညျ၊ညှဈသညျ။ နို့သီးခေါငျးကို ပှတျခကြောကစားပေးသညျ။ကွာတော့ မာမာနှယျ ဖငျ ထဲလီးဝငျတာကောငျးလာသဖွငျ့ဖငျကို အသာနောကျသို့ဆောငျ့ပဈသှငျးပေးလိုကျရာ ကောငျလေးကလညျးမာမာနှယျ့ စိတျတိုငျးကြ သူက ရှသေို့ဆောငျ့အခြ လီးတနျက တဈဆုံးဖငျထဲအတငျးထိုးဝငျသှားလေ၏။ “အား….အမေ့…အီး..အ….ရှီး..နာ လိုကျတာ..အငျး…ကောငျလေး..စောကျပတျကိုနှိုကျစမျး..စောကျရမျးလိုးမနနေဲ့..သူဖငျမခံရတိုငျး…အ..အ.”ကောငျလေး မာမာနှယျ့ ရှပေ့ေါကျကိုအသာပှတျပေး နှိုကျပေးလုပျလိုကျမှ မာမာနှယျလညျး မှရေ့ာကို တံတောငျနှငျ့ထောကျ.မကျြလုံးလေးမှေးခါ.ငွိမျသကျ သှားသညျ။
ကောငျလေးက အခွအေနကေောငျး လာသောကွောငျ့ စောကျပေါကျကိုနှိုကျရငျး ဖငျထဲရှိလီးကို နောကျသို့အသာခြော့ ထုတျသညျ။ လကျနှဈဆဈလောကျ နောကျဆုတျခါ ဆတျခနဲ ရှသေို့ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ “အ..အငျး..အ.ကောငျး တယျ..အငျး..အ..လိုး.ဖငျခံလို့ကောငျးလိုကျတာ..လိုး..လိုး..လိုး..အ.အ.အ.”အစပိုငျးလကျနှဈဆဈလောကျပမေယျ့ နောကျတော့ အရှိနျရလာပွီး ဖငျထဲတဈဆုံးနီးပါးထုတျသှငျး လိုးနသေညျ။ကောငျလေးမှာ စောကျပတျကိုတောငျမနှိုကျအား မာမာနှယျခါးသိမျသိမျ ကိုသာ အတငျးညှဈကိုငျထားပွီး ဖငျထဲသို့မိမိလီးဝငျနထှေကျနသေညျကိုသာ အာရုံစိုကျပွီးလိုးနမေိသညျ။
“ဖေါကျ..ဖေါကျ..ဖေါကျ.ဖေါကျဖေါကျ…အ.အ.အ.အ.အီး.ဖေါကျ..နငျငါ့ဖငျကို.ခလြို့ကောငျးရဲ့လား.ကောငျလေး..ဗေါကျ.ဗေါ ကျ.အီး..အား.အ.အ.” “ဟငျး.ဟငျး..ကောငျး..ကောငျးပါတယျ..မနှယျ..” “အငျ့.အငျ့..ဖငျခံရတာကောငျးလှနျးလို့…ဖငျထဲနောကျဆို လီးတောငျအမွဲတမျး..အ..အငျ့. ထညျ့ထားလိုကျခငျြ.တာ.အ.အ.အငျး..အငျ့..လိုးစမျး..ဖငျကှဲအောငျလိုး….နောကျဆိုစောကျပတျကို မလိုးခိုငျးဘူး..အ..အ.အငျ့.အငျ့.ငါ့ကိုဖငျပဲခြ..သိ…လား..အငျ့အငျ့..အငျ့..” “ဟုတျ..ဟုတျ..မမနှယျ..”နောကျဆုံးကောငျလေးတဈ ဆတျဆတျ လိုးနရေငျး မာမာနှယျဖငျစအိုပေါကျထဲသို့ လီးရညျမြားတဈပွဈပွဈ ပနျးပနျးထုတျလိုကျခါ ပီးသှားလသေညျ။မာမာနှယျ လညျးဖငျထဲက ပူခနဲခံစားလိုကျသညျနှငျ့ တပွိုငျထဲလိုလို စောကျပတျမှ အရညျမြားထှကျခါ နှဈယောကျလုံးတဈယောကျပျေါတဈ ယောကျထပျ..ငွိမျသကျရငျး အမောဆို့နသေညျကို ဖွဖြေောကျနရေလသေညျ။
ကောငျလေးလီးကတော့ ဖငျထဲမှာ စှပျရကျသားရှိနေ သေးသညျ။နှဈယောကျလုံး ခြှေးတလုံးလုံးနှငျ့ ကောငျလေးမှာ ညကျညောလှသညျ့မာမာနှယျပုခုံးသားကို ကိုငျစုပျပွီး အမောဖွနေရေ လေ၏။ “တီ..တီ..တီ..”စားပှဲပျေါမှ တယျလီဖုနျးမညျသံကွောငျ့ နှဈယောကျလုံး အမောဖွသေညျမှမဝသေး ကောငျလေးမှာ ဖငျထဲ ဝငျနသေောသူ့ညီဘှားကို ဆှဲနုပျပွီး ဘေးသို့လိမျးဆငျးကာ ကုတငျပျေါသို့ပတျလတျလှနျခလြိုကျသညျ။ မာမာနှယျ ကတော့.တယျလီဖုနျးကိုကောကျကိုငျလိုကျသညျ။ “ဟလို..” “သမီးနှယျ..ဘဘပါ” “သွျော..ဘဘ..သမီးခုပဲ..ဘဘအကွောငျး စဉျးစားနတော..ပွော.နှဈရကျရှိပွီ.ဘယျသှားနတောလဲ..ဒီမှာ.သမီးက.ဘဘကိုသတိရနတောကို..ဟှနျးနျော.ပွော.ပွော.ဘယျ ကောငျမလေးတှနေ့လေို့လဲ..” “ဟဲ.ဟဲ.သမီးကလညျး ဘဘကဒီသမီးလေးတဈယောကျထဲ..ရှိတာကို.တခွားကောငျမလေးမြား စိတျတောငျမကူးဘူး..” “ဟှနျ့..ပွောတာပဲ.ဘဘနျော..သမီးကှယျရာမှာ..ရှုပျဖို့တော့မစဉျးစားနဲ့..ရှမျးပွညျနယျမှာ..သမီးစုံစမျးရငျ အားလုံးသိတယျ..ကဲ..ပွော..ဘဘကိုတှခေ့ငျြတယျ..အိမျလာမှာလား..ဒါမှမဟုတျ..ဘဘဆီလာရမလား”
“ဘဘဆီ.ဒီညလာလေ သမီး.သမီးကို .ဘဘမိတျဆှတှေနေဲ့မိတျဆတျပေးရဦးမယျ..သမီး..ဘဘမိတျဆှနှေဈယောကျအတှကျ..သမီးသူငယျခငျြးနှဈယောကျ လောကျချေါခဲ့ပါလား..ဟိုတဈခါကလိုပေါ့.. အဆငျပွလေားသမီးလေး..” “အငျး.ရတာပေါ့.ဘဘကလဲ.သမီးချေါခဲ့မယျ လေ.ဘဘ….” “ပွောလေ..သမီး..” “သမီးကို.ခဈြတယျနျော..” “အငျး..ခဈြတာပေါ့ကှယျ.သမီးကလညျး..အရမျးခဈြ” “ခဈ.ခဈ.ခဈ..ဘဘကလညျး.ဒါပဲနျော.ဆေးလေးပါလေးကွိုသောကျထားအုံး..ဟှနျ့.အရှိနျရမှကသြှားဦးမယျ..သမီးကဘဘလိုးတာ ခံခငျြလှပွီ..ခဈ..ခဈ..ခဈ..ဟငျ့” “ဟား.ဟား.အေးပါသမီးလေးရယျ..နောကျမှကွောကျပါပွီလို့ပွောမနနေဲ့အုံး.ဒါနဲ့..သမီး.ဘဘကို တှရေ့ငျဆုခရြမယျနျော..” “အငျ.ဟငျ…ဘာဖွဈလို့…လဲ….ဘဘလငျကွီးရဲ့.” “ရနျကုနျမှာ..ဦးသိုကျမောငျးကှဲနပွေီ..သမီး.ခုနက ပဲ.ဘဘသိတာ..ဘဘနဲ့သမီး.ကွံတာအောငျမွငျသှားပွီ” “ဟငျ.တကယျလားဘဘ.ပွောပါဦး..ဦးသိုကျမောငျးဘယျလိုဖွဈနပွေီလဲ.”
“ဘဘတို့ဂှငျဆငျထားသလိုပဲလေ..ဦးသိုကျမောငျးဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးက..ကိုငျထားတဲ့ပရောဂကျြကို.ဝနျကွီးဌာနပိုငျ မွပေါတယျဆိုပွီး..အမှုရငျဆိုငျခိုငျးထားလိုကျတယျလေ..ဟား..ဟား သမီးကိုမွငျစခေ့ငျြတယျ.ရနျကုနျမှာဦးသိုကျမောငျး ကွှကျလို ပုနျးနရေပွီ.နောကျလညျးနလံထူဖို့မရှိတော့ဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဟဲ” “အငျး..ကနျြတာတော့သမီးသိတယျဘဘရဲ့.တကယျလို့..အဲဒီမွကေ သူတကယျပိုငျတာလား..အမှုနိုငျသှားရငျကော..ဒါမှမဟုတျ…သူ့တကယျနာလံမထူနိုငျအောငျစီးပှားပကျြပွီလား..သမီး သိခငျြ တယျ” “ဒီလိုသမီးရေ..သမီးသိတဲ့အတိုငျး.ဦးသိုကျမောငျး.ပရောဂကျြစာခြုပျကို.သမီးဆီကဦးသိရတယျနျော..ဟုတျတယျ ဟုတျ..အဲဒီစာခြုပျမှာ.သတျမှတျအခြိနျအတှငျးမပွီးလို့ရငျ..ပေးခရြေမယျ့ ပမာဏက..မြားတယျဆိုတာလညျးသမီးသိတယျနျော..” “အငျး.” “အမှနျက..ဦးသိုကျမောငျးကအဲဒီမွကေို တကယျပိုငျတာ..သူကဝနျကွီးဌာနကနတေဆငျ့ဝယျထားတာ.စာခြုပျမှာ လကျမှတျထိုးထားတာက ဌာနညှနျကွားရေးမှူးကိုယျတိုငျလကျမှတျထိုးထားတာ ဦးသိုကျမောငျးကံဆိုးခငျြတော့..အဲဒီညှနျကွားရေး မှူးက.အခုနိုငျငံခွားကို.အရေးကွီးတဲ့နိုငျငံတျောတာဝနျနဲ့ရောကျနတေယျ.သူ့နရောမှာ.ဘဘလူကိုထညျ့ထားတော့.ဘဘကဖုနျးဆကျ ပွောပွီးခိုငျး လိုကျတာနဲ့.ဘဘလူက.တရားရုံးကိုစာတငျပွီး..တရားထဆှဲတာ.”
“အဲဒီဘဘလူက.ဘာမှမသိဘူးလား..” “ဘယျ….ဒီကောငျတှလေား..ဘာမှနားလညျတာမဟုတျဘူး..ဟိုအရငျလူနဲ့အပုံကွီးကှာတာ..ဒါပမေယျ့.ကောငျးတာတဈခုက.ခိုငျး ရငျဘာမှစောဒကမတကျဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဒီကောငျတှကေ မှေးထားတဲ့ခှေးလိုပဲ..ရှုးတိုကျပေးတိုငျးလိုကျကိုကျတာ.ဦးနှောကျနဲ့ဘာမှမ စဉျးစားဘူး..နညျးနညျးပါးပါးအရိုးလောကျကိုကျရရငျကနြေပျနတော..ဘဘကဖုနျးထဲကနေ..ဟကေ့ောငျ.. အရငျကောငျက..ဌာန ပိုငျမွကေိုရောငျးသှားတာမငျးမသိဘူးလား..မငျးအဲဒီကိစ်စရှငျးဆိုတာနဲ့..ဦးသိုကျမောငျးကို.တရားထဆှဲတာ ပဲ..ဟား.ဟား..တျောတျောရယျရတဲ့ကောငျ. တရားထဆှဲတော့.တရားရုံးက.ဦးသိုကျမောငျးစီမံကိနျးအဆောကျအဦးကို..ခြိတျပိတျပီး နို့တဈစာပို့တော့တာပဲ..ဘဘလုပျလိုကျတာဘယျလောကျတောငျ..ဖွဈသှားလဲတော့မသိဘူး.. ရနျကုနျမှာ.ဦးသိုကျမောငျး နခေ့ငျြးညခငျြးမှဲသှားပွီးဆိုပွီး..သူ့ကုမ်ပဏီကရှယျယာတှကေိုတောငျအတငျးထုတျနကွေပွီသမီးရဲ့..” “ဦးသိုကျမောငျး တရားနိုငျ သှားရငျကော.ဘဘ.ပွီးတော့.ဦးသိုကျမောငျးက အဆကျအသှယျတျောတျောကောငျးတယျလို့ကွားတယျ.အဲဒီကိစ်စကိုဘယျလိုလုပျမ လဲ..ဘဘ”
“ဟငျး..ဟငျး..သမီးလေးကလညျး..ဘဘပါ..အခုဦးသိုကျမောငျးရဲ့.ဆရာကွီးတှကေိုယျတိုငျ..ဦးသိုကျမောငျးနဲ့မဆကျ သှယျရဲကွဘူး.ဦးသိုကျမောငျးက..ငှတှေဘေုနျးပွီးထှကျပွေးနတေယျလို့လဲ ကောလဟာလထှကျနတေော့..ရနျကုနျမှာ..စသုံးလုံးက အဲဒီအမှုကိုလကျခံပွီး စဈဆေးရေးလုပျနတော..ဘဘထငျတာ.ဦးသိုကျမောငျး .တရားရုံးမှာတော့အမှုနိုငျမှာပဲ..ဒါပမေယျ့သတျမှတျ ကာလကြျောသှားလို့ သူ့စာခြုပျပါ.လြျောကွေးတှပေေးရတာနဲ့..အခုပွဿနာတှရှေငျးရတာနဲ့ဆို ဦးသိုကျမောငျးတော့..ဒီတဈသကျ နာလနျထူနိုငျမယျမထငျဘူး..” “ခဈ..ခဈ…ဘဘကအရမျးတျောတာပဲ..အငျး..ဒီကွားထဲ..ဘဘပါ..ပါနအေုံးမယျ..တျောကွာ..ဘဘ တပညျ့က.ဘဘခိုငျးလို့လုပျရပါတယျဆိုပွီး.တရားရုံးမှာပွောရငျ..ဘယျနှယျ့လုပျမလဲ” “ဟာ..ဒီကောငျ.လား..ဘဘပွောဒါက..ကိစ်စ ရှငျးလို့ပွောတာ..ဟငျး.ဟငျး..သူ့ဘာသာတရားထဆှဲတာ..ဒီကောငျကိုလညျး..နညျးနညျးပါးပါး.ပေးလိုကျပွီး..အဲဒီဌာနကနဖွေုတျ လိုကျရငျ.. ဘဘအကွောငျးဘယျသူသိတော့မလဲ..ဟုတျဖူးလား..”
“ဟငျ့.ခဈ..ခဈ.ခဈ..ခဈ..အဲဒါကွောငျ့..ဘဘကိုသမီးကအားကိုး တာ..တှမှေ့.ကောငျးကောငျးဆုခမြယျ..ဒါဆိုညမှတှမေ့ယျနျောဘဘ..တာ့တာ..” မာမာနှယျ ဖုနျးခှကျကိုခလြိုကျခါ သူ့ဘေးနားကု တငျပျေါတှငျမှောကျလကျြလေးလှဲခါ အမောဖွနေသေောကောငျလေး၏ ဖငျကို လကျဝါးဖွငျ့ ဖွနျးခနဲခလြိုကျပွီး “ဟဲ့..နငျ့ကိုဒီမှာ သဖေို့ချေါထားတာမဟုတျဘူး…သှားငါ့အတှကျ အောကျထပျမှာ ဖြျောရညျလုပျလာခဲ့လို့ပွောလိုကျ..ပွီးရငျနငျပွနျတော့..ငါရမေိုးခြိုး ပွီးဆငျးလာခဲ့မယျလို့ပွောလိုကျအုံးနျော..သှား.. ယောကျြားလေးဖွဈပွီး ..နှေးတိနှေးကနျနဲ့..မွနျမွနျ” ကောငျလေးမှာ ကုတငျ ခွရေငျး.တှငျပုံထားသောသူ့အဝတျအစားပုံကို အသာကောကျယူပွီး အခနျးထဲမှ ကိုယျတုံးလုံးထှကျသှားလေ၏။ ၎င်းငျးကောငျလေးထှကျသှားသညျနှငျ့ မာမာနှယျလညျး ရခြေိုးခနျးဝငျခါ ရနှေေးနှငျ့ ရတေဈဝခြိုးပဈလိုကျသညျ။ရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလာသညျနှငျ့ စားပှဲပျေါတှငျ သူမအတှကျ စတျောဘယျရီဖြျောရညျ ခှကျကအဆငျသငျ့။
ညဖကျ မာမာနှယျသူ့ဘိုးတျောကို ဖွဖြေျောရနျ အလှပွငျဆိုငျသှားဖို့ယခုကတညျးက အဝတျအစားမြားထုတျရှေးနသေညျ။သူမ နှငျ့အတူလိုကျမညျ့ မိနျးကလေးနှဈယောကျကို လညျးဖုနျးဆကျခါ အသငျ့ခြိနျးလိုကျသေးသညျ။ ဘာပဲပွောပွော.မာမာနှယျစိတျလကျပေါ့ပါးနသေညျ။သီခငျြးလေးတအေးအေးနှငျ့ အဝတျအစားမြားကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြနသေညျ။ဟုတျသညျလေ..ခုလေးတငျ သူမ၏ ခလုတျကနျသငျးတဈခု ရှငျးလငျးသှားပွီ ဆိုတော့.ဘာပဲပွောပွော ပြျောသညျလေ၊ပြျောသညျ။ သူမဒီနှဈအတှငျး ရနျကုနျစီးပှားရေးလောကသို့ ခွခေခြှငျ့ရတော့မညျ။ သူမဘိုး တျောအကူအညီနှငျ့ ဆိုလြှငျတခဏအတှငျး စီးပှားရေးလောကတှငျ မာမာနှယျနာမညျကို လူတိုငျးပွောစမှတျဖွဈနစေရေမညျ။ မာ မာနှယျအတှေးကအတိတျပုံရိပျကို ပွနျလညျတူးဖျေါနမေိ၏။
မာမာနွယ်ကုတင်ပေါ်တွင် ခေါင်းအုံးကို ကျောမှီထိုင်ကာပေါင်နှစ်ချောင်းကိုခပ်ကားကားလုပ်ထားစဉ် သူမထမီအောက်မှ ခေါင်းတစ်ခုကို အသာပွတ်ပေးနေပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို အရသာခံသောက် နေ၏။ဆေးလိပ်ငွေ့ကို အဆုတ်ထဲသို့ရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး တစ် ချက်အဖုတ်ထဲမှ ကျင်ခနဲဖြစ်သွားသဖြင့်မျက်နှာတစ်ချက်ရှုံ့လိုက်သည်။တုတ်ခိုင်သော ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အတင်းညှပ်ထားလိုက် ပြီး ခေါင်းကိုအတင်းပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။နောက်မှ ဘေးရှိစားပွဲပေါ်မှ ဆေးလိပ်ပြာခွက်ထဲ ဆေးလိပ်ကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ထမီ အောက်စကို ဆွဲလှန်လိုက်သောအခါ သူမပေါင်ကြားမှ နုနယ်လွန်းသော မျက်နှာပေါက်နှင့် အသားအရေဖြူဖွေးနေသော ခပ်ချော ချောကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရွှဲနစ်လျက် ခေါင်းမော့လာလေ၏။
“ကောင်လေး..နင့်ကိုဘယ်သူကရပ်ခိုင်းလို့ရပ်လိုက်တာလည်း..” သူမအမေးကြောင့် ထိုချာတိတ်မှာ ထိတ်လန့်စွာဖြင့် “ဟို…မနွယ် ပီးသွားလို့..တော်ပီထင်လို့ပါ..ကျွန်တော်ထပ်လျက်ပေးပါ့မယ်..”ကောင်လေးက အလန့်တကြား မျက်လုံးဝိုင်းကြီးများနှင့် ဆိုလိုက် ရင်း မာမာနွယ်ပေါင်ကြားကို မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး လျှာထုတ်ခါ အလျှားလိုက်တစ်ချက်ပင့် လျက်လိုက်သည်။ “တော်စမ်း..ငါ့ စောက်ပတ်ကျင်တယ်..ထ….ငါ့အကျီချွတ်ပေးစမ်း”မာမာနွယ်ကောင်လေးကိုငေါက်လိုက်ရင်း သူမရင်စေ့အကျီကို ချွတ်ခိုင်းလိုက် သည်နှင့် ၎င်း ကောင်လေးကလည်း သူမအကျီကြယ်သီးများကို အမိန့်အတိုင်း လက်လှမ်းခါဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။
သူမရင်ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားသည်နှင့် ဟင်းချိုပန်းကန်လုံးကို မှောက်ထားသည်နှင့် တူသောစနေ နှစ်ခိုင်နှင့် မို့မောက်တင်းမာ နေလျက် နီရဲသောပတ္တမြားစေ့ကလေးတင်ထားသည့်အလား နို့သီးခေါင်းမှာ အကြောစိမ်းမျှင်မျှင်လေးများ ဝန်းရံခစားနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ကောင်လေးကတော့ မာမာနွယ်အမိန့်ပေးထားလို့ ကုတင်ပေါ်ရောက်ကတည်းက မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း တက်လာချင်းဖြစ်သည်။
“ဟဲ့…နင့်ကို..ကြည့်ဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး..ငါ့နို့ကို ကိုင်လေ..ဘာအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာလည်း…”ကောင်လေးမှာ မာမာ နွယ်ကို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ် သူမခိုင်းလိုက်သဖြင့် မာမာနွယ့် နို့နှစ်လုံးကို အသာအယာကိုင်လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ်က လည်း လက်တစ်ဖက်ကိုကောင်လေး ပေါင်ကြားထဲထည့်ကာကောင်လေး၏ ဖွားဖက်တော်ကို လက်နှင့်ဆုတ်လိုက်သည်။ ကောင် လေ၏ လီးမှာ ထိုအချိန်ထိမထောင်လာသေးသည်ကို အခုမှ မာမာနွယ်သိလိုက်ရတော့ “ဟင်..နင်..ဘာဖြစ်လို့..နင့်လီးကဘာဖြစ် နေတာလဲ..ဟဲ့..ပြောလေ..” “ဟို..ဘာမှမဖြစ်….ကျွန်တော်…ဟို….မနွယ်ကို…..ကြောက်….ခဏလေးပါ..မနွယ်..အခု ..ချက်ချင်း..မတ်……..မှာ”
“နင်နဲ့ကတော့….အခုချက်ချင်း..နင်ဂွင်းထုစမ်း…..ငါလိုးတာခံချင်နေမှ..တွေ့မယ်..နောက်မှ..အခု..နင့် လီးကိုထုလေ…မြန်မြန်လုပ်..” “ဟုတ်ကဲ့..မနွယ်..အင့်..အင့်..”ချာတိတ်မှာ မာမာနွယ်စိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်သဖြင့် သူ့၈လက်မ လောက်ရှည်သောလီးကို အရေပြားနာအောင်အတင်းဆွဲဆွဲချရင်း ဂွင်းထုလိုက်သည်နှင့် လီးမှာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထခါမတ် ထောင်ထ လာလေသည်။မာမာနွယ်က ကောင်လေး၏လီးမတ်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့် အောက်တွင်ကျန်သေးသောထမီကို ချွတ် လိုက်ရင်းကောင်လေးဆီလှမ်းပစ်လိုက်သည်။ကောင်လေးကလည်း မာမာနွယ်လှမ်းပစ်လိုက်သောထမီကို ယောင်ပြီးဖမ်းလိုက် သည်။
“နင်..အဲဒီထမီကို ဝတ်ထားစမ်း..မိန်းမလိုဝတ်…လီးလည်းကျမသွားစေနဲ့..ဝတ်လေ..”ကောင်လေးမှာ ထမီကိုမိန်းမလို ဝတ်ဆင် လိုက်ရသည်။လီးကထောင်မတ်နေသဖြင့် ထမီအောက်တွင်တောင်မတ်နေလျက်ရှိလေ၏။ “ကဲ..နင်..ပက်လပ်အိပ်.. နောက်ထမီ ကိုလှန်လိုက်..ဟုတ်ပီ..”မာမာနွယ်ပြောပြောဆိုဆို ကောင်လေး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ တက်ခွလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ကို လီးနှင့်တေ့ခါ ဖြည်းဖြည်းခြင်းထိုင်ချလိုက်သည်။ “ကောင်မ..နင့်လီးက..တုတ်လိုက်တာ..အင်း..အင်း..အင့်..အင့်..ကောင်မ..ငါ.နင့်ကိုတက်လိုး တာကောင်းတယ်မလား…ကောင်မဖြေလေ..ဖြန်း..အင့်.အင့်..အင့်..” “ကောင်းပါတယ်..မနွယ်ရယ်လိုးပါ..ကျွန်တော့်ကိုလိုးပေး ပါ…ကောင်းလွန်းလို့..အ..မနွယ်ဖြည်းဖြည်း..အ..ဖြည်း..အ..ဗေါက်..ဗေါက်..ဗေါက်..ဗေါက်…”မာမာနွယ်မှာ အပေါ်မှနေခါ ဖင်လုံး ကြီးကိုမမတင် ..ပီးအရှိန်နှင့် ကောင်လေးပေါ်ဆောင့်ဆောင့်ချသည်။ကောင်လေးပါးကိုလည်း အပေါ်မှ ဘယ်ပြန်ညာပြန်လည်းရိုက် လိုက်သေးသည်။
တင်ပါးနှစ်ခု ကြားမှာ ၎င်းကောင်လေး၏ လီးတန်က ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြင့်နှစ်ယောက်လုံးအရှိန်တက်နေကြသည်။ ကြာလာတော့မာမာနွယ်က မိန်းမသားဆိုတော့မောလာသည်။ “ဟင်..ဟင်..ကောင်..လေး..ထ..ငါ့ကိုလာလိုးစမ်း..ငါကုန်းပေး မယ်” မာမာနွယ်ပြောပြီးသည်နှင့် ကောင်လေးကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းခါ ဘေးတွင် ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးထားလိုက်သည်။်၎င်း ကောင်လေးမှာလည်း အမြန်ထ မာမာနွယ့်ခါးကိုစုံကိုင်ပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲ ဆောင့်သွင်း..ဆောင့်ထုတ်ဖြင့် ကြမ်းကြမ်းလေးလိုး တော့၏။မာမာနွယ် ဖင်လုံးမှာ ဆောင့်လိုးနေသည့်ဒဏ်ကြောင့် လှိုင်းထလျက်ရှိလေ၏။ တဖြည်းဖြည်းကောင်လေးမှာ မြန်လာပြီး မတ်တတ်ရပ်ဒူးကွေးကာ တဆက်ဆက်ဖြင့် စက်သေနတ်ပစ်သလို လိုးလိုက်မှ မာမာနွယ်မျက်နှာမော့လာပြီး ဆံပင်များခါရမ်း လျက် အတင်းပင် ပြန်လည် ဖင်ကိုနောက်ပစ်ပြီး ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ တောင့်ထားနေရသည်။
“ဘတ်..ဘတ်.ဘတ်.ဘတ်..ဗေါက်.ဗေါက်.ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်.အင့်.အင့်.အ..အ..အ.အအ.အ.အအအအအအအအ အ..အင့်.အား..ရှီး..ဟ..”တစ်မိနစ်လောက် စက်သေနတ်မွှေ့လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ့် စောက်ပတ်ကုန်းမှ အရည်များ ကျဆင်းလာ ပြီး လက်မြှောက်အရှုံးပေး ဖင်ကုန်းပေးသည်နှင့်တန်အောင် အရသာရှိစွာဖြင့် မှောက်ကျသွားလေ တော့၏။မာမာနွယ်ပီးသွား သည်ကို သိလိုက်သည်နှင့် ကောင်လေးမှာ ဆက်မလိုးရဲ အသာအယာ သူ့လီးကိုစောက်ပတ်ကြားမှ နောက်ဆုတ်ခါထုတ်လိုက်ရ သည်။ “ဟူး..ကောင်လေး..နင်တယ်တော်ပါလား..ငါစောက်ရည်တော်တော်ခန်းသွားပြီ..နင်မပီးသေးဘူးမလား..လာ..ငါမျက်နှာ ပေါ်တက်ခွပြီး..ဂွင်းထုစမ်း..”ကောင်လေး လီးကိုကိုင် မာမာနွယ်လည်ပင်းနားတက် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး လီးကိုလက်နှင့် ဂွင်းထုနေ လေသည်။
“အင်း..ထု..ထု..လရည်တွေ.ငါ့မျက်နှာအနှံ့စင်အောင်လုပ်စမ်း..ထု.မြန်.မြန်မြန်..ထု..အ..ဟုတ်ပြီ..အင်း.ကောင်းလိုက်တာ..နွေးနေ တာပဲ..အင်း..အင်း”လရည်ထွက်သည်နှင့် မာမာနွယ်က လီးကိုလက်နှင့်ကိုင်ပီး မျက်နှာအနှံ့ဖြန်းချတော့၏။ လီးဒစ်ဖျားကိုလည်း ပါးစပ်နှင့် နို့စို့သလို တပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်သေး၏။ကောင်လေး လီးရည်ကုန်သွားမှလွှတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ အဖြူပြစ်ပြစ် လရည် များကို တယုတယနှင့် လိမ်းကျံနေလေတော့သည်။ “နင့်..လရည်ကပျစ်လိုက်တာ..အင်း.အရသာလဲရှိတယ်..လာအုံး..ဟစမ်း..”မာ မာနွယ်က သူ့လက်ညှိုးနှင့်မျက်နှာပေါ်က လရည်အချို့ကို သပ်ယူလိုက်ပြီး ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ လက်ညှိုးထည့်ခါ လရည်ကို လျက်ခိုင်းလေရာ “ဘယ်လိုလဲ..ငါပြောတာ..နင့်လရည်က .အရသာရှိတယ်မလား..”
“အင်း..ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့.မ.နွယ်…အ.ရသာ.ရှိပါတယ်..”ကောင်လေးမှာ ကိုယ့်လရည်ကို ကိုယ်တိုင်မျိုချနေရပြီး မာမာနွယ်အကြိုက် အလိုက်သင့်ဖြေကြားမှ ပိုဆိုးတော့သည်။ “အင်း..ဒါဆို..နောက်နင်..ဂွင်းထုပြီး.ကိုယ့်လရည်ကို..စားပေါ့..အခုတော့..ငါ သေးပေါက်ချင်လာပြီ..အိမ်သာထဲလိုက်ခဲ့..”မာမာနွယ်ကုတင်ပေါ်မှ ထပြီး ၎င်းကောင်လေးလက်ကိုဆွဲကာ အခန်းထဲရှိသူမအိမ်သာ သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ နောက်အိမ်သာဘိုထိုင်တွင် ထိုင်ပြီး “လာ..ကောင်လေး..နင်ကြိုက်တဲ့..ငါ့မျက်နှာပေါ်က..နင့်လရည်တွေ ကို လျှာနဲ့လာလျက်စမ်း..ပြောင်နေအောင်လျက်နော်..” ကောင်လေးခင်ဗျာ..ဘာမှာပြန်မလှန်ဝံ့ပဲ..သူ့လရည်များ ဖြင့်ပြောင်လက် ပြစ်ချွဲနေသော မာမာနွယ့်မျက်နှာအနှံ့ကို လျှာလေးထုတ်ပြီး ရက်ရက်ပေးနေစဉ် မာမာနွယ်က အိမ်သာထဲသို့သေးများ တဗြန်းဗြန်း ပေါက်ချနေလျက်ရှိသည်။မာမာနွယ်သေးပေါက်ပီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ လရည်များတစက်မကျန် အောင်ရက်ပြီးသွားပြီဖြစ်၏။
“ကောင်းတယ်..နင့်က…အခြောက်ကျနေတာပဲ..အင်းလေ..ငါလိုးတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းအခြောက်ဖြစ်ကုန်တာပဲ..နင်ကထမီနဲ့ပို လိုက်တယ်..နောက်ငါအပြင်သွားရင် မိန်းမလိုဝတ်ပြီးလိုက်ရမယ်..ကြားလား” “ဟုတ်ကဲ့ပါ..မနွယ်” “နောက်က..ရှင်လို့ထည့် ပြောစမ်း..နောက်ငါခေါ်ရင်..ရှင်လို့ထူးရမယ်..ဗျာလို့ထူးရင်..ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်..” “ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်..” “အင်း..လာ..ငါ့ သေးပေါက်ပြီးတာ နင်ကဘာကြည့်နေတာလဲ..ငါ့သေးဘယ်လိုနေလဲ.လာခပ်သောက်ကြည့်..”မာမာနွယ်က အေးစက်စွာခိုင်းလိုက် သဖြင့် ကောင်လေးဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ဘိုထိုင်အိမ်သာထဲတွင် သေးနှင့်ရေ ရောနေသော ဝါကျင့်ကျင့်အရေများကို လက်ခုတ်နှင့် ထည့်ယူလိုက်ခါ မော့သောက်ချလိုက်သည်။ “ဘယ်နှယ့်လဲ..ငါ့သေးက..ကောင်းတယ်မလား..နံကောနံလား”ကောင်လေးမှာ ဆိုးဝါး လှသောအရသာရည်ကို ကြိတ်မှိတ်မျိုချလိုက်ရင်း “ဟို..ကောင်းပါ..တယ်…သေးနံ့တော့…နံတယ်ရှင့်” “ဟင်း..ဟင်း..သေးပဲနံမှာ ပေါ့..ဒါတောင်ရေရောထားလို့..ကဲပါ..လာနောက်ဆိုငါ..နင့်ပါးစပ်ထဲသေးပေါက်ချပါ့မယ်..အခုတော့နင်ပြန်လိုက်ခဲ့..င့ါဖင်ကိုလာ လိုးဦး..ငါဖင်ခံချင်နေပြီ…ဖင်ပေါက်ကလဲယားလိုက်တာ.ရှီး”မာမာနွယ်အိုးကိုခါရမ်းပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်သွားသဖြင့် ကောင်လေး မှာလည်း ဖင်ချပေးရန်လိုက်သွားရလေ၏။
ကုတင်စောင်းတွင်လက်ထောက်လိုက်ပြီး ဖင်ကိုနောက်ပစ် ခါးကိုကုန်းလိုက်သဖြင့် ဖြူဖွေးနေသော ဖင်သားနှစ်ခုကြားမှ နီညိုရောင်ဖင်ပေါက်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ သေးသောက်လိုက်ရသဖြင့် နင်တင်တင်ဖြစ်နေသည်မှာ ထိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရ သည်နှင့် ပြေပျောက်သွားသလို ကောင်လေးခံစားလိုက်ရသည်။ မာမာနွယ်ကုန်းချက်ကလည်း ရက်စက်သည်။တုတ်ခိုင်ပြီးလုံးဝန်း သော ပေါင်နှစ်ချောင်း ထောက်ကန်ထားသည့် အိစက်ညက်လှသည့် ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကြားမှဖင်ပေါက်ကို လိုးရမည်ဆိုတော့ ကာ…..။ကောင်လေးမှာ ခုနမှပီးသော်လည်း ၎င်းအနေအထားကိုမြင်တွေ့ ရသည်နှင့် သူ့ပေါင်ကြားက ညီဘွားမှာ မတ်ထောင်လာ နေ၏။ ဝတ်ထားသောထမီကို ကွင်းလုံးချွတ်ထားလိုက်သဖြင့်လည်း လီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြီး တောင်နေသည်။ “ကောင် လေး..နင်အံဆွဲထဲမှာ ဖင်လိုးဖို့ဆီ ရှိတယ်..နင့်လီးကိုရွှဲနေအောင်လိမ်း..နောက်ငါ့ဖင်ကိုလည်းလာလိမ်းပေးအုံး..မြန်မြန်..ဒီက.ဖင်ခံ ချင်ပါပြီးဆိုမှ…”မာမာနွယ်ဆိုလိုက်သည်နှင့် ယခုမှကောင်လေးမှာ တက်တက်ကြွကြွနှင့် အံဆွဲကိုဖွင့် ပုလင်းထဲမှ ဘာရည်မှန်းတော့ မသိပြစ်ချွဲချွဲအရည်တစ်ချို့ကို သူ့လီးမှာ ရွှဲနေအောင်သုတ်ပေးလိုက်၏။
နောက်သူလက်မှာ အရည်တစ်ချို့ကို နှိုက်ယူလာပြီး မာမာ နွယ်ကုန်းပေးထားသော နောက်တွင်နေရာယူခါ လက်ကိုဖင်သားခြမ်းကြီးများကို ဆွဲဆွဲနယ်ပေး..ဖင်ပေါက်ကို လက်နှင့်ခပ်ကြမ်း ကြမ်းလေးနှိုက်ပေးလုပ်လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ်မှာ ဖင်ကိုနောက်ကိုအတင်းကောက်ပစ် ပါးစပ်မှလည်းတဟင့်ဟင့်နှင့် ကာမဒီရေ အထူးတက်နေလေတော့၏။ “အင်းကောင်းတယ်..နှိုက်.နှိုက်.ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်လေ..အင့်..အင့်..အ..ကောင်လေးရယ်…ငါ့ ဖင်ကို..လက်တစ်ဆုံးထိုးစမ်း..အား..အ.အင့်..လုပ်.လုပ်.. ကောင်းတယ်..ကောင်း..အ.အ.ငါ့ဖင်ကို ..ရိုက်အုံး လေ..အင့်.အင့်..ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်းဖြန်း..အား.အားအား..ရိုက်ရိုက်..ကောင်းတယ်..အင်း..” “ဖြန်း.ဖြန်း.ဖြန်း.”မာမာနွယ်ဖင်သားများ ကို နီရဲတွတ်အောင် ကောင်လေးမှာ လက်ဖဝါးဖြင့်တဖြန်းဖြန်းရိုက်နှပ်နေလေသည်။ သူမတော့မည်သို့နေမည်မသိ ကောင်လေး ကတော့.လက်ဖဝါးကိုကြိန်းစက်နေသည်။ “ရပြီ..ငါ့ကိုဖင်ကိုလိုးတော့..အီး…….ဟုတ်တယ်..ဖြည်းဖြည်း..အ..အ. ရှီး..နာလိုက် တာ..အား..ဖြည်းဖြည်းထည့်..အ..အ.အင်း..ခဏ..ခဏ..စိမ်ထားအုံး”မာမာနွယ့်ဖင်ထဲ ကောင်လေးလီးမှာ တစ်ဝက်လောက်အသာ ကြိတ်ထည့်သောကြောင့် ဝင်သွားသည်။ ဖင်သားတစ်ခုလုံး ရှုံ့ထားသဖြင့် လီးမှာ ကြပ်ထုပ်လျက်အံကြိတ်ယူရအောင်အရသာရှိလှ သည်။
ကောင်လေးကလည်း စိမ်ထားတုန်း အငြိမ်မနေ ဖင်ကိုစကောဝိုင်းပတ်တလှုပ်လှုပ် ကစားပေးနေ၏။မာမာနွယ့် နို့ကို လည်း လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းလှမ်းကိုင်သည်၊ ဆွဲသည်၊ညှစ်သည်။ နို့သီးခေါင်းကို ပွတ်ချေကာကစားပေးသည်။ကြာတော့ မာမာနွယ် ဖင် ထဲလီးဝင်တာကောင်းလာသဖြင့်ဖင်ကို အသာနောက်သို့ဆောင့်ပစ်သွင်းပေးလိုက်ရာ ကောင်လေးကလည်းမာမာနွယ့် စိတ်တိုင်းကျ သူက ရှေ့သို့ဆောင့်အချ လီးတန်က တစ်ဆုံးဖင်ထဲအတင်းထိုးဝင်သွားလေ၏။ “အား….အမေ့…အီး..အ….ရှီး..နာ လိုက်တာ..အင်း…ကောင်လေး..စောက်ပတ်ကိုနှိုက်စမ်း..စောက်ရမ်းလိုးမနေနဲ့..သူဖင်မခံရတိုင်း…အ..အ.”ကောင်လေး မာမာနွယ့် ရှေ့ပေါက်ကိုအသာပွတ်ပေး နှိုက်ပေးလုပ်လိုက်မှ မာမာနွယ်လည်း မွေ့ရာကို တံတောင်နှင့်ထောက်.မျက်လုံးလေးမှေးခါ.ငြိမ်သက် သွားသည်။
ကောင်လေးက အခြေအနေကောင်း လာသောကြောင့် စောက်ပေါက်ကိုနှိုက်ရင်း ဖင်ထဲရှိလီးကို နောက်သို့အသာချော့ ထုတ်သည်။ လက်နှစ်ဆစ်လောက် နောက်ဆုတ်ခါ ဆတ်ခနဲ ရှေ့သို့ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ “အ..အင်း..အ.ကောင်း တယ်..အင်း..အ..လိုး.ဖင်ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ..လိုး..လိုး..လိုး..အ.အ.အ.”အစပိုင်းလက်နှစ်ဆစ်လောက်ပေမယ့် နောက်တော့ အရှိန်ရလာပြီး ဖင်ထဲတစ်ဆုံးနီးပါးထုတ်သွင်း လိုးနေသည်။ကောင်လေးမှာ စောက်ပတ်ကိုတောင်မနှိုက်အား မာမာနွယ်ခါးသိမ်သိမ် ကိုသာ အတင်းညှစ်ကိုင်ထားပြီး ဖင်ထဲသို့မိမိလီးဝင်နေထွက်နေသည်ကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီးလိုးနေမိသည်။
“ဖေါက်..ဖေါက်..ဖေါက်.ဖေါက်ဖေါက်…အ.အ.အ.အ.အီး.ဖေါက်..နင်ငါ့ဖင်ကို.ချလို့ကောင်းရဲ့လား.ကောင်လေး..ဗေါက်.ဗေါ က်.အီး..အား.အ.အ.” “ဟင်း.ဟင်း..ကောင်း..ကောင်းပါတယ်..မနွယ်..” “အင့်.အင့်..ဖင်ခံရတာကောင်းလွန်းလို့…ဖင်ထဲနောက်ဆို လီးတောင်အမြဲတမ်း..အ..အင့်. ထည့်ထားလိုက်ချင်.တာ.အ.အ.အင်း..အင့်..လိုးစမ်း..ဖင်ကွဲအောင်လိုး….နောက်ဆိုစောက်ပတ်ကို မလိုးခိုင်းဘူး..အ..အ.အင့်.အင့်.ငါ့ကိုဖင်ပဲချ..သိ…လား..အင့်အင့်..အင့်..” “ဟုတ်..ဟုတ်..မမနွယ်..”နောက်ဆုံးကောင်လေးတစ် ဆတ်ဆတ် လိုးနေရင်း မာမာနွယ်ဖင်စအိုပေါက်ထဲသို့ လီးရည်များတစ်ပြစ်ပြစ် ပန်းပန်းထုတ်လိုက်ခါ ပီးသွားလေသည်။မာမာနွယ် လည်းဖင်ထဲက ပူခနဲခံစားလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်ထဲလိုလို စောက်ပတ်မှ အရည်များထွက်ခါ နှစ်ယောက်လုံးတစ်ယောက်ပေါ်တစ် ယောက်ထပ်..ငြိမ်သက်ရင်း အမောဆို့နေသည်ကို ဖြေဖျောက်နေရလေသည်။
ကောင်လေးလီးကတော့ ဖင်ထဲမှာ စွပ်ရက်သားရှိနေ သေးသည်။နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတလုံးလုံးနှင့် ကောင်လေးမှာ ညက်ညောလှသည့်မာမာနွယ်ပုခုံးသားကို ကိုင်စုပ်ပြီး အမောဖြေနေရ လေ၏။ “တီ..တီ..တီ..”စားပွဲပေါ်မှ တယ်လီဖုန်းမည်သံကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး အမောဖြေသည်မှမဝသေး ကောင်လေးမှာ ဖင်ထဲ ဝင်နေသောသူ့ညီဘွားကို ဆွဲနုပ်ပြီး ဘေးသို့လိမ်းဆင်းကာ ကုတင်ပေါ်သို့ပတ်လတ်လှန်ချလိုက်သည်။ မာမာနွယ် ကတော့.တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ “ဟလို..” “သမီးနွယ်..ဘဘပါ” “သြော်..ဘဘ..သမီးခုပဲ..ဘဘအကြောင်း စဉ်းစားနေတာ..ပြော.နှစ်ရက်ရှိပြီ.ဘယ်သွားနေတာလဲ..ဒီမှာ.သမီးက.ဘဘကိုသတိရနေတာကို..ဟွန်းနော်.ပြော.ပြော.ဘယ် ကောင်မလေးတွေ့နေလို့လဲ..” “ဟဲ.ဟဲ.သမီးကလည်း ဘဘကဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ထဲ..ရှိတာကို.တခြားကောင်မလေးများ စိတ်တောင်မကူးဘူး..” “ဟွန့်..ပြောတာပဲ.ဘဘနော်..သမီးကွယ်ရာမှာ..ရှုပ်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့..ရှမ်းပြည်နယ်မှာ..သမီးစုံစမ်းရင် အားလုံးသိတယ်..ကဲ..ပြော..ဘဘကိုတွေ့ချင်တယ်..အိမ်လာမှာလား..ဒါမှမဟုတ်..ဘဘဆီလာရမလား”
“ဘဘဆီ.ဒီညလာလေ သမီး.သမီးကို .ဘဘမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆတ်ပေးရဦးမယ်..သမီး..ဘဘမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်အတွက်..သမီးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လောက်ခေါ်ခဲ့ပါလား..ဟိုတစ်ခါကလိုပေါ့.. အဆင်ပြေလားသမီးလေး..” “အင်း.ရတာပေါ့.ဘဘကလဲ.သမီးခေါ်ခဲ့မယ် လေ.ဘဘ….” “ပြောလေ..သမီး..” “သမီးကို.ချစ်တယ်နော်..” “အင်း..ချစ်တာပေါ့ကွယ်.သမီးကလည်း..အရမ်းချစ်” “ခစ်.ခစ်.ခစ်..ဘဘကလည်း.ဒါပဲနော်.ဆေးလေးပါလေးကြိုသောက်ထားအုံး..ဟွန့်.အရှိန်ရမှကျသွားဦးမယ်..သမီးကဘဘလိုးတာ ခံချင်လှပြီ..ခစ်..ခစ်..ခစ်..ဟင့်” “ဟား.ဟား.အေးပါသမီးလေးရယ်..နောက်မှကြောက်ပါပြီလို့ပြောမနေနဲ့အုံး.ဒါနဲ့..သမီး.ဘဘကို တွေ့ရင်ဆုချရမယ်နော်..” “အင်.ဟင်…ဘာဖြစ်လို့…လဲ….ဘဘလင်ကြီးရဲ့.” “ရန်ကုန်မှာ..ဦးသိုက်မောင်းကွဲနေပြီ..သမီး.ခုနက ပဲ.ဘဘသိတာ..ဘဘနဲ့သမီး.ကြံတာအောင်မြင်သွားပြီ” “ဟင်.တကယ်လားဘဘ.ပြောပါဦး..ဦးသိုက်မောင်းဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲ.”
“ဘဘတို့ဂွင်ဆင်ထားသလိုပဲလေ..ဦးသိုက်မောင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက..ကိုင်ထားတဲ့ပရောဂျက်ကို.ဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေပါတယ်ဆိုပြီး..အမှုရင်ဆိုင်ခိုင်းထားလိုက်တယ်လေ..ဟား..ဟား သမီးကိုမြင်စေ့ချင်တယ်.ရန်ကုန်မှာဦးသိုက်မောင်း ကြွက်လို ပုန်းနေရပြီ.နောက်လည်းနလံထူဖို့မရှိတော့ဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဟဲ” “အင်း..ကျန်တာတော့သမီးသိတယ်ဘဘရဲ့.တကယ်လို့..အဲဒီမြေက သူတကယ်ပိုင်တာလား..အမှုနိုင်သွားရင်ကော..ဒါမှမဟုတ်…သူ့တကယ်နာလံမထူနိုင်အောင်စီးပွားပျက်ပြီလား..သမီး သိချင် တယ်” “ဒီလိုသမီးရေ..သမီးသိတဲ့အတိုင်း.ဦးသိုက်မောင်း.ပရောဂျက်စာချုပ်ကို.သမီးဆီကဦးသိရတယ်နော်..ဟုတ်တယ် ဟုတ်..အဲဒီစာချုပ်မှာ.သတ်မှတ်အချိန်အတွင်းမပြီးလို့ရင်..ပေးချေရမယ့် ပမာဏက..များတယ်ဆိုတာလည်းသမီးသိတယ်နော်..” “အင်း.” “အမှန်က..ဦးသိုက်မောင်းကအဲဒီမြေကို တကယ်ပိုင်တာ..သူကဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ဝယ်ထားတာ.စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတာက ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတာ ဦးသိုက်မောင်းကံဆိုးချင်တော့..အဲဒီညွှန်ကြားရေး မှူးက.အခုနိုင်ငံခြားကို.အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်နဲ့ရောက်နေတယ်.သူ့နေရာမှာ.ဘဘလူကိုထည့်ထားတော့.ဘဘကဖုန်းဆက် ပြောပြီးခိုင်း လိုက်တာနဲ့.ဘဘလူက.တရားရုံးကိုစာတင်ပြီး..တရားထဆွဲတာ.”
“အဲဒီဘဘလူက.ဘာမှမသိဘူးလား..” “ဘယ်….ဒီကောင်တွေလား..ဘာမှနားလည်တာမဟုတ်ဘူး..ဟိုအရင်လူနဲ့အပုံကြီးကွာတာ..ဒါပေမယ့်.ကောင်းတာတစ်ခုက.ခိုင်း ရင်ဘာမှစောဒကမတက်ဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဒီကောင်တွေက မွေးထားတဲ့ခွေးလိုပဲ..ရှုးတိုက်ပေးတိုင်းလိုက်ကိုက်တာ.ဦးနှောက်နဲ့ဘာမှမ စဉ်းစားဘူး..နည်းနည်းပါးပါးအရိုးလောက်ကိုက်ရရင်ကျေနပ်နေတာ..ဘဘကဖုန်းထဲကနေ..ဟေ့ကောင်.. အရင်ကောင်က..ဌာန ပိုင်မြေကိုရောင်းသွားတာမင်းမသိဘူးလား..မင်းအဲဒီကိစ္စရှင်းဆိုတာနဲ့..ဦးသိုက်မောင်းကို.တရားထဆွဲတာ ပဲ..ဟား.ဟား..တော်တော်ရယ်ရတဲ့ကောင်. တရားထဆွဲတော့.တရားရုံးက.ဦးသိုက်မောင်းစီမံကိန်းအဆောက်အဦးကို..ချိတ်ပိတ်ပီး နို့တစ်စာပို့တော့တာပဲ..ဘဘလုပ်လိုက်တာဘယ်လောက်တောင်..ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူး.. ရန်ကုန်မှာ.ဦးသိုက်မောင်း နေ့ချင်းညချင်းမွဲသွားပြီးဆိုပြီး..သူ့ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာတွေကိုတောင်အတင်းထုတ်နေကြပြီသမီးရဲ့..” “ဦးသိုက်မောင်း တရားနိုင် သွားရင်ကော.ဘဘ.ပြီးတော့.ဦးသိုက်မောင်းက အဆက်အသွယ်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကြားတယ်.အဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မ လဲ..ဘဘ”
“ဟင်း..ဟင်း..သမီးလေးကလည်း..ဘဘပါ..အခုဦးသိုက်မောင်းရဲ့.ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်..ဦးသိုက်မောင်းနဲ့မဆက် သွယ်ရဲကြဘူး.ဦးသိုက်မောင်းက..ငွေတွေဘုန်းပြီးထွက်ပြေးနေတယ်လို့လဲ ကောလဟာလထွက်နေတော့..ရန်ကုန်မှာ..စသုံးလုံးက အဲဒီအမှုကိုလက်ခံပြီး စစ်ဆေးရေးလုပ်နေတာ..ဘဘထင်တာ.ဦးသိုက်မောင်း .တရားရုံးမှာတော့အမှုနိုင်မှာပဲ..ဒါပေမယ့်သတ်မှတ် ကာလကျော်သွားလို့ သူ့စာချုပ်ပါ.လျော်ကြေးတွေပေးရတာနဲ့..အခုပြဿနာတွေရှင်းရတာနဲ့ဆို ဦးသိုက်မောင်းတော့..ဒီတစ်သက် နာလန်ထူနိုင်မယ်မထင်ဘူး..” “ခစ်..ခစ်…ဘဘကအရမ်းတော်တာပဲ..အင်း..ဒီကြားထဲ..ဘဘပါ..ပါနေအုံးမယ်..တော်ကြာ..ဘဘ တပည့်က.ဘဘခိုင်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဆိုပြီး.တရားရုံးမှာပြောရင်..ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ” “ဟာ..ဒီကောင်.လား..ဘဘပြောဒါက..ကိစ္စ ရှင်းလို့ပြောတာ..ဟင်း.ဟင်း..သူ့ဘာသာတရားထဆွဲတာ..ဒီကောင်ကိုလည်း..နည်းနည်းပါးပါး.ပေးလိုက်ပြီး..အဲဒီဌာနကနေဖြုတ် လိုက်ရင်.. ဘဘအကြောင်းဘယ်သူသိတော့မလဲ..ဟုတ်ဖူးလား..”
“ဟင့်.ခစ်..ခစ်.ခစ်..ခစ်..အဲဒါကြောင့်..ဘဘကိုသမီးကအားကိုး တာ..တွေ့မှ.ကောင်းကောင်းဆုချမယ်..ဒါဆိုညမှတွေ့မယ်နော်ဘဘ..တာ့တာ..” မာမာနွယ် ဖုန်းခွက်ကိုချလိုက်ခါ သူ့ဘေးနားကု တင်ပေါ်တွင်မှောက်လျက်လေးလှဲခါ အမောဖြေနေသောကောင်လေး၏ ဖင်ကို လက်ဝါးဖြင့် ဖြန်းခနဲချလိုက်ပြီး “ဟဲ့..နင့်ကိုဒီမှာ သေဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး…သွားငါ့အတွက် အောက်ထပ်မှာ ဖျော်ရည်လုပ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်..ပြီးရင်နင်ပြန်တော့..ငါရေမိုးချိုး ပြီးဆင်းလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်အုံးနော်..သွား.. ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး ..နှေးတိနှေးကန်နဲ့..မြန်မြန်” ကောင်လေးမှာ ကုတင် ခြေရင်း.တွင်ပုံထားသောသူ့အဝတ်အစားပုံကို အသာကောက်ယူပြီး အခန်းထဲမှ ကိုယ်တုံးလုံးထွက်သွားလေ၏။ ၎င်းကောင်လေးထွက်သွားသည်နှင့် မာမာနွယ်လည်း ရေချိုးခန်းဝင်ခါ ရေနွေးနှင့် ရေတစ်ဝချိုးပစ်လိုက်သည်။ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာသည်နှင့် စားပွဲပေါ်တွင် သူမအတွက် စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည် ခွက်ကအဆင်သင့်။
ညဖက် မာမာနွယ်သူ့ဘိုးတော်ကို ဖြေဖျော်ရန် အလှပြင်ဆိုင်သွားဖို့ယခုကတည်းက အဝတ်အစားများထုတ်ရွေးနေသည်။သူမ နှင့်အတူလိုက်မည့် မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို လည်းဖုန်းဆက်ခါ အသင့်ချိန်းလိုက်သေးသည်။ ဘာပဲပြောပြော.မာမာနွယ်စိတ်လက်ပေါ့ပါးနေသည်။သီချင်းလေးတအေးအေးနှင့် အဝတ်အစားများကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နေသည်။ဟုတ်သည်လေ..ခုလေးတင် သူမ၏ ခလုတ်ကန်သင်းတစ်ခု ရှင်းလင်းသွားပြီ ဆိုတော့.ဘာပဲပြောပြော ပျော်သည်လေ၊ပျော်သည်။ သူမဒီနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စီးပွားရေးလောကသို့ ခြေချခွင့်ရတော့မည်။ သူမဘိုး တော်အကူအညီနှင့် ဆိုလျှင်တခဏအတွင်း စီးပွားရေးလောကတွင် မာမာနွယ်နာမည်ကို လူတိုင်းပြောစမှတ်ဖြစ်နေစေရမည်။ မာ မာနွယ်အတွေးကအတိတ်ပုံရိပ်ကို ပြန်လည်တူးဖေါ်နေမိ၏။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သူဌေးမကွီးမာမာနှယျ
မိုးကာနဲ့ရမေခြိုးခငျြတဲ့ အပြိုကွီး မမထား